Tondraky Ny Onjan-drano i Egypta · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Caroline Karaba
Voadika ny 28 Marsa 2018 3:08 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, বাংলা, Français, English
(Marihina fa tamin'ny 24 Janoary 2010 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nitatitra i Zeinobia tao amin'ny bilaoginy, Chroniques égyptiennes :
Nisy loza nitranga teto Egypta, tany Sinai sy tany Assouan. Nahita ny fahasimbana tao Assouan i Mubarak . Saika tapaka tanteraka ny fifandraisan'ny tanàndehibe roa sy ny faritra ivelany .
Nanambara ny Minisiteran'ny Fahasalamana fa olona miisa efatra no maty, ary efa ho 40 teo ho eo no naratra taorian'ny tondradrano. Ireo no antontan'isa ofisialy hatreto, ary mbola mety hitombo izany satria mbola ireo olona no tsy hita, ​​indrindra tany Al Arish.
Rehefa nisy ny fanavaozam-baovao avy amin'i Zeinobia dia nitombo ho 15 ny isan'ireo niharamboina .
Namela faritra maro ho tapaka fifandraisana tanteraka ny tondradrano, indrindra fa tany Sinai.
Nilaza i Alanay, bilaogera avy ao Sinai hoe:
Tao anatin'izay andro vitsivitsy izay, tsy afaka nitatitra momba ny tondradrano izay namely an'i Arish sy Sinai aho satria tapatapaka ny fifandraisana aterineto tao Rafah sy Sheikh Zawyed. Androany vao niverina ny tatitra satria niverina tamin'ny laoniny ny fifandraisana.
Naneho ny hatezerany ny vahoaka tany Sinai, toerana izay nahitana trano sy fiara lasan'ny rano, satria ela loatra vao tonga ny vonjy .
Nanoratra i Sinaï News :
Niteraka fahasosorana ho an'ny mponina ny tondradrano tampoka tao Sinai noho ny fahanteran'ny fitaovam-pitateran'ny mpamonjy voina izay tokony handeha any amin'ny faritra atsinanana sy atsimon'ny faritra.
Namoaka lahatsary vitsivitsy tao amin'ny bilaoginy i Nawara Negam izay nampiseho ny halehiben'ny fahasimbana.
Nanangana komity mpanohana ireo niharamboina tamin'ny tondradrano ireo solontenan'ny antoko politika sy ny ONG ho ezaka handresena ny tsy fahombiazan'ny governemanta sy ny sampan-draharahan'ny mpamonjy voina ofisialy nandritra ny krizy. Nilaza izy ireo tao anatin'ny fanambarana fa nisy ny andiana fiara nalefa nankany Sinai nitondra ny fitaovana fanampiana vonjy taitra.
Nalefa any Sinai ny andiana fanampiana vonjy taitra, nitondra sakafo, fanafody ary lamba firakotra. Natao tamin'ny 20 ka hatramin'ny 24 Janoary 2010 ny fanangonana izany.
Niala ny alin'ny 24 Janoary ny andiana fiara mitondra fanampiana , ary nisy ny laharana natokana hiantsoana ho an'ireo izay te-handray anjara na hanao fanomezana.